ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, iyadlala kwaye iyiprimiyamu [Hlaziya] | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 10/11/2021 10:00 | ngokubanzi, Reviews
Asisoloko sinalo ithuba lokuhlalutya kunye nokujonga ezo zixhobo zokophula umhlaba. Ngeli xesha iya kukukhumbuza ngokuqinisekileyo kwi-Asus Zenbook Pro Duo isixhobo esiye sahlalutya apha kwiGadget News kwaye apho le Zephyrus Duo isela ngokuthe ngqo ngokwemiqathango yoyilo, kodwa njengesiqhelo, iguqulelwe kwiRiphabhlikhi yeGamers yoluntu.
Sijonga nzulu kwi-ASUS ROG entsha yeZephyrus Duo, ilaptop yokudlala enesikrini esiphindwe kabini kunye ne-scandal hardware, ngaba iyakuzisa oko ikuthembisayo? Yiloo nto kanye esifuna ukuyihlalutya kule laptop ibonelelwa njengeyona ndlela ikhethekileyo nekhethekileyo kwimarike.
1 Uyilo olulodwa nolungenakuthelekiswa nanto
3 Unxibelelwano ngobuninzi
4 Iphaneli efanelekileyo kunye namava alungileyo emultimedia
Uyilo olulodwa nolungenakuthelekiswa nanto
Into yokuqala eyabamba ingqalelo yethu kuyilo lwayo, nangona sifumene ukufana okufanelekileyo, njengoko sele sikhankanyile, kunye nomntakwabo kwinguqulo yabathengi eqhelekileyo i-Zenbook Duo, inomlingiswa wayo. Ngokuqinisekileyo xa kuthelekiswa noguqulelo lwangaphambili akukho tshintsho lungako, nangona kunjalo isigqubuthelo sangasemva sinemikrolo emincinci eqhelekileyo yeemveliso zeRiphabhlikhi yeGamers. kunye nemigca yayo ehlaselayo, kweli candelo ulwakhiwo lunikeza ukuvakalelwa kokuqina kwaye ngaphezu kwayo yonke ikhwalithi, i-ASUS ibisoloko ingumvelisi oyingcali kule miba kwaye le mveliso yayingayi kuba ngaphantsi.
Ubungakanani: X x 360 268 20,9 mm
Ubunzima: Iikhilogram ezi-2,48
Ayingqindilili ngokugqithisileyo ukuba sithathela ingqalelo yonke into eyenziwe ngayo, nangona kunjalo, igcina inqanaba elaneleyo lonxibelelwano. Isikrini "esiphindwe kabini" siphakanyiselwe kwindawo ekhululekile ngakumbi logama nje sisebenzisa isixhobo, into endicinga ukuba ibalulekile. Ukufuna ukwazi kwakhona indawo yedijithali "yetrackpad" kwicala lasekunene, inyanzeliswa kule meko yindawo encitshisiweyo yebhodibhodi, ethi yona ibe nokuhamba okwaneleyo kunye ne-RGB ye-LED ekhanyisayo ukuya kulindelo.
Kwinqanaba leprosesa le ASUS ROG Zephyrus Duo Iqala ngeprosesa ye-AMD, ngokukodwa i-Ryzen 9 kwinguqulo yayo ye-5900HX kunye nokusebenza okungaphezulu kokuchasanayo kwemidlalo, ukunikela ngamaqondo obushushu. Ihamba kunye ne-32 GB ye-DDR4 RAM kwi-3200 Mhz kwaye ekugqibeleni, yokugcina akukho nto ingaphantsi kwe-0TB NVMe RAID 1 iinkumbulo eziqinileyo zesimo, ngokucacileyo kule sixhobo akukho zixhobo eziye zagcinwa kwaye kunokuthiwa ukuba i-ASUS ROG iphose. yonke inyama kwi-spit, kunzima ukufumana izixhobo ezifanayo.
I-GPU ayikho ngasemva, sinayo I-NVIDIA GeForce RTX 3080 130W kunye ne-16GB yememori ye-GDDR6, Elinye lamakhadi emizobo aphezulu kwimarike, eyasungulwa ekuqaleni kuka-2021 kwimodeli ethile yeelaptops, sinokuthi yenye yezona ndlela zibalaseleyo ezikhoyo kwintengiso. Ngokumalunga nesantya sokucutshungulwa kwedatha, i-NVMe yayo ephindwe kabini ye-SSD kwi-RAID 0 idlula i-7 GB / s isantya sokudlulisa (kancinci ngaphezu kwesiqingatha ngokubhaliweyo). Kwinqanaba lobuchwephesha, sijongene nenye yeelaptops eziguquguqukayo nezinamandla esinokuzifumana kwintengiso, kwaye Inexabiso, ukuba ucinga ukuyithenga ungayithenga kwiAmazon ngeyona nto iphambili.
Siqala, njengesiqhelo, ngamazibuko abonakalayo. Sinezibuko ngasemva ukuze sifumane intuthuzelo HDMI 2.0b kwimeko apho sifuna ukudibanisa imonitha yesibini, kunye nezibuko I-RJ45 LAN kunye neliki I-USB-A 3.1. Sikwanayo nezibuko emacaleni I-USB-C 3.1 DP + PD, ekhatshwa ngamanye amazibuko amabini I-USB-A 3.1, igalelo elidityanisiweyo lomsindo kunye nesidibanisi esiphumayo kunye neadaptha yamandla ekulo mzekelo ikhethekileyo kule laptop. Ewe kunjalo, izibuko le-USB-C ekuZihambisweni koMbane liya kusinika amandla ukuba siyawafuna.
Kwinqanaba lokuqhagamshelwa ngaphandle kwamacingo, le Zephyrus Duo ikhethe inguqulelo yamva nje kuyo yonke into, sinayo. I-WiFi 6 iWi-Fi 6 (Gig +) (802.11ax) 2 × 2 RangeBoost kunye I-Bluetooth 5.1, Nangona sihlala sincoma ukudlala ngekhebula kunye ne-DMZ Host ye-IP yekhompyutha, inyaniso kukuba imidlalo ngaphandle kwe-FPS le WiFi yesizukulwana sesithandathu iqinisekisa i-latencies engaphantsi kwe-5ms kunye noqhagamshelwano oluzinzileyo lwe-600/600 ngokweemvavanyo zethu. Kule meko asikhange sihlangabezane neengxaki zobugcisa, enyanisweni amava abe mahle ngokumangalisayo.
Iphaneli efanelekileyo kunye namava alungileyo emultimedia
Kufuneka siqale ngescreen se I-15,6 intshi kwisisombululo se-4K apho kusetyenziswa khona ipaneli ye-IPS LCD ilungiswe kakuhle ngokwemibala, ngaphandle kokuvuza kokukhanya kunye nokwaleka okulungileyo ukuphepha ukubonakaliswa okungafunwayo. Inomlinganiselo wokuhlaziya we-120 Hz eyenza ukuzonwabisa kwethu kudlala, ewe, ayinayo iWebcam into enzima ukuyiqonda kwi-laptop efana nale, kutheni i-ASUS?
Igalelo LAG: Ubuninzi 3ms
Kwicala lakhe i I-ScreenPad Plus yi-14,1 intshi kwaye ngokucacileyo iyabambeka, sinokusebenza nayo, sithathe amanqaku okanye siyisebenzise njengolwandiso lwedesktop. Ineepikseli ezingama-3840 ngokuthe tye kwaye inenkqubo yokuphakamisa ngokuzenzekelayo xa uphakamisa isiciko se-laptop ephucula umoya wokuphefumla kakhulu.
Ngokwenxalenye yayo, inezithethi ezimbini ze-4W ezine-Smart Amp kunye ne-2 2W tweeters, ukuyenza kwangoko enye yeelaptops ezilungileyo xa isiza kwisandi, ifaniswe kuphela yiApple MacBooks. Inenkxaso yomsindo weDolby Atmos kunye netekhnoloji ekrelekrele yokukhulisa.
I-Aura Sync yokukhanya kwe-RGB
Ngokuphathelele ukuzimela, sinenkqubo ye I-4-cell Li-ion (90 WHrs, 4S1P) ukuba nangona kuya kuba ngokwaneleyo iiyure ezingaphezu kwezintathu okanye ezine ofisi automation, iimvavanyo esizenzayo ngelixa edlala kuya kuxhomekeka kwintsebenzo umbuzo. Akufanelekile ukuhlala kakhulu kulo mba njengoko kucetyiswa ukuba udlale kwi-intanethi.
Ngokucacileyo le laptop ikhuselekile kwaye kulula ukubheja, kodwa ngenxa yoko kufuneka hamba ngebhokisi, ngaphezulu kwe-2.900 ye-euro eyixabisayo xa zithengiswa zixabisa yonke igram yale laptop ebonakala ilula njengokuthatha eyona nto ingcono yendlu nganye kwaye uyibeke kunye kwi-chassis entle nesebenzayo.
Ithunyelwe nge: NgoNovemba 10 ukusuka kwi2021
Uyilo olunomtsalane kunye nolubonakalayo
Unxibelelwano olukhulu lomzimba kunye nolungenacingo
I-hardware ephezulu ngandlela zonke
Imodyuli ye-RAM ayinakwandiswa
Ixabiso linokuba libi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, iyadlala kwaye iyiprimiyamu [Uhlahlelo]